Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo sheegay in marxuum Drs Xaawa Cabdi ay kaalin kasoo qaadatay adeegga Caafimaadka ee dalka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid marxuum Drs Xaawa Cabdi Dhiblaawe oo maanta ku geeryootay magaalada Mogadishu.
Mudane Mursal ayaa sheegay in marxuumada ay kaalin weyn kasoo qaadatay adeegga Caafimaadka ee dalka, isla markaanna muddadii dalka uu bur-bursanaa ay kusoo shaqeysay duruufo adag.
“Innaa Lillahi Wa Inaa Ilayhi Raajicuun. Annigo Ku Hadlaya Magaca Xildhibaanada Iyo Guddonka Golaha Shacabka BJFS Waxan Tacsi Tiiraanyo Leh U Diraya Dhaammam Shacabka Soomaliyeed , Gaar ahaan Eheladii Iyo Qoyskii Ay Ka Geeriyootay Drs. Xaawa Cabdi Dhiblaawe”, ayuu yiri Guddoomiye Mursal.
Madaxweynaha Galmudug iyo C/raxmaan C/shakuur oo ka wada-hadlay shirka saddexaad ee Dhuusmarreeb